Adda Bilisummaa Oromoo: Dhaabota siyaasaa lama, maqaa tokko - BBC News Afaan Oromoo
Adda Bilisummaa Oromoo: Dhaabota siyaasaa lama, maqaa tokko
Kora soodareetti gaggeefameen dhaabonni Oromoo lama ABO Tokkoomee fi ABO Qaaama Cehumsaa walitti makamuun maqaa 'Adda Bilisummaa Oromoo' jedhu jalatti dhaaba tokko tahuu labsanii jiru.
"Nuti warri Adda Bilisummaa Oromoo akka jaarmayaatti tokko, homaa garaagarummaa hin qabnu," hayyu duree dhaaba waloome kanaa ta'uun kan filaman Obbo Abbaa Nagaa Jaarraa.
Dhaabichi maqaa ABO'tiin moggaafamuun ammoo dhaaba siyaasaa Obbo Daawud Ibsaatiin hogganamu kan maqaa wal-fakkaatu qabu waliin maqaa tokkoon dhaabonni siyaasaa lama Oromiyaa keessa akka jiraatan tasiseera.
Dhimma kanarratti kan gaafanne Obbo Abbaa Nagaa Jaarraa, "dhimmi maqaa kuni amma durallee dhimma wal-falmisiisaa ta'ee ka'aa ture" jedhu.
Haa ta'u malee dhaabonni maqaa ABO'tiin of waaman gara tokkootti dhufuun waan hin oolleef dhiibbaa hin fidu jedhu.
"Nuti ABO'n akka Jaarmayaatti tokkuma. Homaa garaagarummaa hin qabnu. Asxaan keenyaa fi maqaan keenyas tokko. Warra maqaa ABO qaban kaanilleen walumaan qabsoo gochaa turre. Ammas rakkoo kamuu furree tokko ta'uuf irratti hojjechaa jirra. Akka tokko taanus abdii guddaa qabna," jedhan.
Maqaa wal-fakkaatuun boordii filannootti galmaahuuf rakkoo akka hin uumneefis galmaa'uuf deemuun duratti ABO Obbo Daawud Ibsaan hogganamu waliin marii xumurree tokko taanee gara boordii filannootti galmaa'uutti deemna jedhan.
Mariin tokkummaatti dhufuu erga gara biyyaatti galanii itti fufee jiraachuus himan.
''Ammaan duras maqumaan garagara jirra malee guyyaan nuti wal hin dubbisiin hin turre. Abbootiin gadaa, qeerroo fi gamtaan barattootaas tookkummaa keenyarratti nu dubbisaa turan. Nutis dhuunfaan ittuma jirra" jedhu Abbaa Nagaa Jaarraa.
"Rakkoo uumuu danda'a"
ABO Obbo Daawud Ibsaatiin hogganamuuf dubbi himaa kan ta'an Obbo Toleeraa Adabaa garuu dhimmichi rakkoo uumuu akka danda'u dubbatu.
"Dhimma moggaasa maqaa paartilee walitti makamanii kana nutis kaleessuma dhageenye" kan jedhan Obbo Toleeraan, "moggaasni maqaa wal-fakkaatu kun uummatas afaan faajjessee, boordii filannootti galmaa'uufis rakkoo uumuu danda'a," jedhu.
Dhaabni isaanii dhimma maqaa wal-fakkaatuun moggaafamuu kana irratti ofdura mari'atee ejjennoosaa akka ibsus eeraniiru.
Paartiilee amma walitti makamuun maqaa ABO mogaaffatan kana waliin garuu tokkummaa uumuuf mariin taasifamaa akka jiru himaniiru. Dhaabni isaanii dhaaba waloomee maqaa ABO moggaafate kana dabalatee dhaabota Oromoo biroo waliin tokkummaa uumee hojjechuuf fedhii qaba, mariinis itti fufeera jedhan Obbo Toleeraan.
Marii kanaan osoo nuti waliigaluu dhabneeyyuu abbaan qabsoo uummanni Oromoos waan tokkummaa keenyaaf nu tumsaa jiruuf, tokko ta'uu homaa shakkii hin qabnu," jedhu Abbaa Nagaa Jaarraa.
Addi Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaaden (ONLF) Finfinneetti waajjira bane